လှကျော်ဇော – ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့ တကိုယ်ရေ ကြီးပွားလိုမှု | MoeMaKa Burmese News & Media
အကြောင်းကတော့ မေမေ သွားရောက်ခိုလှုံနေခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်စမစ်ဒွန်း (ကရင်အမျိုးသားကြီး) မျက်နှာလည်းပါ။ ဖေဖေ့ မျက်နှာလည်း ပါပုံရပါတယ်။ အဲဒီကာလ မေမြို့ကိုသိမ်းတဲ့ ကရင်တပ်ဟာ ယခင်ဗမာ့တပ်မတော်ထဲက တပ်များကပဲဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖေဖေနဲ့ တစုံတရာ ဆက်ဆံဖူးသူများဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖေ့အပေါ် အမြင်ကောင်းကြပုံရပါတယ်။ မေမေက ရန်ကုန်က လေယာဉ်ပျံလာခေါ်ပြီ၊ လူနဲ့ အဝတ်အစား အနည်းအကျဉ်းပဲယူပါလို့ မှာလိုက်တဲ့အတွက် အဝတ်အစားသေတ္တာတလုံးနဲ့ သမီးအငယ်ကိုချီပြီး သားအမိနှစ်ယောက် လေယာဉ်ပျံကွင်းကို ဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ကိုလိုက်ပို့တဲ့ ကရင်စစ်ဗိုလ်လေးကို မေမေက “ဗိုလ်ကြီးရယ် ကျွန်မတော့ ရှိသမျှပစ္စည်း ဒီလိုပဲ ပုံထားခဲ့ရပါတယ်” လို့ပြောတော့ အဲဒီစစ်ဗိုလ်လေးက မေမေ့ကို အစ်မကြီး စိတ်ချပါ။ အပ်တိုတချောင်း မပျောက်စေရပါဘူး။ ဗိုလ်မှူး (ဖေဖေ့ကို ရည်ညွှန်းတာပါ) က ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဆက် ဆံတဲ့နေရာမှာ ဒီလိုဆက်ဆံသူပါ။ (လက်ညှိုးကို ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းပြတယ်တဲ့)။ တချို့စစ်ဗိုလ်တွေလို ဒီလိုဆက်ဆံသူ မဟုတ်ပါဘူး (လက်ညှိုးကို ကောက်ပြတယ်) လို့ ဆိုသတဲ့။ တကယ်လည်း မေမေတို့ ဖေဖေတို့ပစ္စည်းတွေကို ကားတစင်း နဲ့တင်ပြီး မင်္ဂလာဒုံကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစစ်ဗိုလ်လေး ကတိပေးခဲ့သလိုပဲ အပ်တိုတချောင်းတောင် မပျောက်ခဲ့ပါဘူး။ တကယ်တော့ မေမြို့ကိုသိမ်းတဲ့ ကရင်တပ်က အများစုတပ်သားများဟာ ဖေဖေအစောပိုင်းက လက်နက်ဖြုတ်ပြီး မေမြို့ အချက်ပြတပ်ရင်းထဲမှာ အကျယ်ချုပ်နဲ့ နေနေသူများပါ။ ဗမာ့တပ်မတော်ထဲက ကရင်တပ်တွေ လှုပ်ရှားလာတော့ စစ်ရုံးချုပ် က မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှူး ဖေဖေ့ကို လှမ်းပြီး ကရင်တပ်တွေကို လက်နက်ဖြုတ်ခိုင်းပါတယ်။ ဖေဖေက သူတို့တတွေကို အချက် ပြတပ်ရင်း ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ စုဝေးစေပြီး မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အခြေအနေတွေ တိုင်းပြည်အခြေအနေတွေ ရှင်းပြပြီး ယာယီ သဘော လက်နက်တွေအပ်ဖို့ ဟောပြောတဲ့အတွက် အသာအတကြည် လက်နက်တွေအပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျွန်မ ဆက်၍ရေးခြင်သောဖေဖေအကြောင်းများ ဆောင်းပါးအမှတ် (၂၄)
2 Responses to လှကျော်ဇော – ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့ တကိုယ်ရေ ကြီးပွားလိုမှု
Dr. Maung Maung Gyi on June 23, 2015 at 2:49 am
ဗမာ့တပ်မတော်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို စစ်သေနာပတိ၊ ဗိုလ်လက်ျာကို ဒုတိယ စစ်သေနာပတိ လို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့လည်း ဗိုလ်ချုပ်စမစ်ဒွန်း ကို သေနာပတိကြီးလို့ဘဲခေါ် ခဲ့ကြပါတယ်။ ဗိုလ်နေဝင်း သေနာပတိ ဖြစ်လာတော့ စစ်ဦးစီးချုပ်လို့အမည်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ သူအကြောင်းပြတာက သေနာပတိ ဟာ ပါဠိကလာတာဖြစ်ိလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်စတဲ့စစ်သား၊ စစ်ဗိုလ်တွေအလွယ်တကူနားလည်မည့် မြန်မာစကား စစ်ဦးစီးချုပ်လို့အမည်ပြောင်းရတာပါတဲ့။
ဒါပေမဲ့ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာက ဗိုလ်နေဝင်းဟာ တပ်ထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ဗိုလ်လက်ျာတိုို့လို “ချစ်၊ ကြောက်၊ ရိုသေ” ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘဲ ကြောက်လို့ကိုးကွယ်နေရတဲ့ “နတ်ဆိုး”လိုလူမို့ တချို့အရာရှိကြီးတွေက ကွယ်ရာမှာ ” သေနာပတိကြီး” လို့မခေါ်ဘဲ ဆင်တူရိုးမှားအသံထွက်နဲ့ “သေနာငတိကြီး”လို့ သရ်ာတော်တော် ခေါ်ကြသတဲ့။ “ဟေ့တိုးတိုးပြောကြ၊ “သေနာငတိကြီး” ကြားသွားရင် နားရင်းအအုပ်ခံရပြီး အလုပ်ပါပြုတ်မယ်” စတဲ့သရ်ာသံတွေ ဗိုလ်နေဝင်းကြားသွားလို့ စစ်ဦးစီးချုပ်လို့အမည်ပြောင်းပါသတဲ့။ ဧဝံ ဤသို့ မေ အကျွန်ုပ်သည် သုတံ ကြားခဲ့ရဘူးကြောင်း ပါခင်ဗျား။
Dr. Zhivaka(Kambawza) on June 23, 2015 at 9:18 am
Dr.Daw Hla Kyaw Zaw- Dear Ah Ma “HLA” , I would like to confirm that Native Birth place of Late General Smith Don is “In Ye Gyi Kyun” village of Kyon Pyaw Township, Irrawaddy Division instead of KALAW, Shan State. There is also buried place(Tomb) in that village when he expired. I had been visited there when I was Township Medical Officer of Kyaung Gon Township. In Ye Gyi Ngapi( Shrimp Paste) is very famous & delicious. Dr.Maung